Ugwu & Agụba bụ nnukwu aha PC nke na - abịa gam akporo taa | Gam akporosis
Egwuregwu kachasị adaba na mma agha, ụta na ube na-abịa gam akporo na Mount & Blade
Egwuregwu egwuregwu ọtụtụ egwuregwu edobere na Middle Ages nwere nzọ dị iche iche, site na MMO ndị a ma ama ebe World of Warcraft bụ eze, ọbụna ọrụ kachasị dị ọcha n'ime MMORPG Olee otu Ultima Online ga esi adi na ya?, ma ọ bụ iru ihe kachasị dị irè na-emetụ aka dị ka nke rutere taa taa na gam akporo akpọrọ Mount & Blade.
Ọ bụrụ na ị na-achọ aha ebe agha na ọgụ kachasị mma iji mma agha na ọta weghachite, Ugwu & Agụba bụ otu n'ime ụdị kachasị mma, na-eweghachi ọgụ ahụ. dị ka mmadụ ole na ole nwee ike nweta na desktọọpụ kọmputa. Yabụ inwe ike ịnụ ụtọ ya na Android site taa bụ akụkọ dị mma maka egwuregwu vidio na sistemụ arụmọrụ Google.
Na gam akporo enwerekwa «ọdụ ụgbọ mmiri» nke njikwa / aha kọmputa Olee otú ndị Ukwu Izu Nchekwa onwe usoro na GTA III, GTA osoje City na ọhụrụ wepụtara GTA San Andreas.
Ugwu & Agụba bụ ọdụ ụgbọ mmiri PC nke egwuregwu PC gam akporo, mana yana nkwarụ na naanị ndị nwere njikwa Nvidia Shield ma ọ bụ mbadamba nwere ike ịnụ ụtọ ya nke nwere nhazi Nvidia Tegra 4 dị ka HP Slate 7 Extreme.
Egwuregwu ruru ihe egwuregwu 64 na Mount & Blade
Ndị gị ndị nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu a dị ukwuu na mbadamba gam akporo gị, mara nke ahụ ị ga-aga n'ihu ụwa mepere emepe iji merie jiri mma agha gị, ụta ma ọ bụ ube n'egwuregwu ọtụtụ egwuregwu nke ndị egwuregwu 64 na iji nnukwu dike gị mee ihe.
Na ebe a anyi agaghi eche ihu "obere" nke PC Mount & Blade, kama anyị ga-enwe otu egwuregwu maka nwee ike ịnụ ụtọ ọgụ dị ka mgbe ọ bụla na gam akporo.
A nnukwu anya na ị ga-ewere ndị gị bụ ndị na-egwuri egwu Mount & Blade na PC, aha na-ahapụghị onye ọ bụla na-enweghị mmasị na nke jisiri ike ịme aha maka aha asọmpi egwuregwu egwuregwu na-emetụ aka.
Ozi ndị ọzọ - RPG Rise nke Mana ka ewepụtara ya n'oge anwụ site na Square Enix
Ugwu & Blade: Warband
Developer: Lelọ Ntụrụndụ TaleWorlds_TR
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu kachasị adaba na mma agha, ụta na ube na-abịa gam akporo na Mount & Blade
Royal Revolt 2, ọtụtụ agha